नेपालै स्वीट्जरल्यान्ड ! - परिहास - नेपाल
नेपालै स्वीट्जरल्यान्ड !
चुनाव आयो कि हाम्रा नेताहरु सबै एउटै कुरा भन्न थाल्छन्– मैले जितेँ भने नेपाललाई स्वीट्जरल्यान्ड बनाइदिन्छु । नेपाललाई स्वीट्जरल्यान्ड बनाइदिन्छु भन्दै धेरै नेताहरुले चुनाव जिते । जसले स्वीट्जरल्यान्ड बनाउँछु भनेनन्, उनीहरु हारे । नेपाललाई स्वीट्जरल्यान्ड बनाउँछु भन्ने नेतालाई सबैले मन पराउने रहेछन् । मन परेपछि भोट आउनु पनि स्वाभाविकै भयो ।
हाम्रा नेताहरु नेपाललाई स्वीट्जरल्यान्डै चाहिँ बनाउन किन चाहन्छन् भन्ने कुरा त्यतिबेला थाहा थिएन । बनाउने नै हो भने संसारमा अरु पनि धेरै ल्यान्ड छन् । जस्तो कि, हल्यान्ड, पोल्यान्ड, स्कटल्यान्ड, ग्रीनल्यान्ड । तर नेताहरु यी कुनै पनि ल्यान्डको नाम लिँदैनन् । स्वीट्जरल्यान्डकै मात्र नाम लिन्छन् । किन ?
त्यो किन भन्ने कुरा त अहिले आएर पो थाहा भयो । वास्तवमा स्वीट्जरल्यान्डमा कालो धन लुकाउने राम्रो व्यवस्था रहेछ । कालो धन लुकाएर राख्ने गोप्य बैंकहरु पनि त्यहाँ थुप्रै रहेछन् । स्वीट्जरल्यान्डको बैंकमा कालो पैसा राखेका केही नेपालीको नाम हालै सार्वजनिक भयो । हाम्रा नेताहरुलाई स्वीट्जरल्यान्ड मन परेको मुख्य कारण यो रहेछ । यदि नेपालै स्वीट्जरल्यान्डजस्तो बनेको भए कालो धन यहीँ लुकाउन पाइन्थ्यो । कालो पैसा पनि यहीँ कमाउन पाइन्थ्यो । त्यस्तो सुविधा नपाएकाले विचरा काला व्यवसायीहरु जम्मै आफ्नो धन स्वीट्जरल्यान्डसम्म लगेर राख्न बाध्य छन् । यदि नेपाल नै स्वीट्जरल्यान्डजस्तो भैदिएको भए त्यस्तो समस्या आउने थिएन । कसो ?